Why Oil-Free Water Injected Screw Compressor technology ? - Atlas Copco Thailand
Why Oil-Free Water Injected Screw Compressor technology?
ဘာကြောင့် ရေကိုအသုံးပြုပြီး လေ( ဆီပါဝင်မှုမရှိသော) ကို ထုတ်လုပ်ပေးသော ရိုထရီ ( Rotary) ကွန်ပရက်ဆာ နည်း ပညာကို ပြောင်းသုံးသင့်သလဲ။
သင်စက်ရုံမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဆီကို အသုံးပြုပြီး လေကိုထုတ်ပေးသည့် ကွန်ပရက်ဆာသည် ကောင်းမွန်စွာနှင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသေချာပါသလား။ သင်၏စိတ်ချရမှုအတွက် Atlas Copco မှထုတ်လုပ်ထားသော ဆီအစား ရေထိုသွင်းပြီး လည်ပတ်ရသော ကွန်ပရက်ဆာ ကိုအသုံးပြုရန် သင့်၏စိတ်ကို အဓိက လှုံဆော်ပေးနိုင်သည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းများကို ကြည့်ကြည့် ကြရအောင်။
✅ လေ၏ဖိအား ကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် စစ်စတန် ပါဝင်ခြင်း
✅ ဖိအားကို ၁၃ barg ဖြင့် တည်ဆောက်ပေးခြင်း
✅ လေအေးအခြောက်ခံစက် (Dryer) ကို သီးခြား မတပ်ဆင်ရခြင်း ၊ လေအေးအခြောက်ခံစက် (Dryer) ကို ကွန်ပရက်ဆာ နှင့် တွဲလျက် တည်ဆောက်ထားခြင်း
✅ အဆင့်ဆင့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ခြင်းက တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းထက် လေယိုစိမ့်မှု ကို ပို၍ဖြစ်စေခြင်း
✅ ကွန်ပရက်ဆာ ၏ ဆူညံ မှာ 79DB ထက်မပိုသောကြောင့် သီးသန့် ကွန်ပရက်ခန်း မလိုအပ်ဘဲ လည်ပတ်နိုင်ခြင်း
ထပ်မံ၍ Atlas Copco မှ ထုတ်လုပ်သော ရေကိုအသုံးပြုပြီး လေ( ဆီပါဝင်မှုမရှိသော) ကို ထုတ်လုပ်ပေးသော ကွန်ပရက်ဆာ သည် သုံးစွဲသူများအတွက် အကောင်းဆုံးသော အကျိုးကျေးဇူးများ ကို အောက်ပါအတိုင်း စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
✅ ကွန်ပရက်ဆာဆီ အစား ရေကိုအသုံးပြုပြီး လေ( ဆီပါဝင်မှုမရှိသော) ကို ထုတ်လုပ်ပေးသော ကြောင့် ဝက်အူ(Screw Element) ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အပူလျော့နည်းစေခြင်း
✅ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဘဲ ပျမ်းမျှအားဖြင့် စွမ်းအင်ကို ၃၅% ချွေတာနိုင်ခြင်း
✅ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန် တိကျသောဖိအားအဆင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
✅ သန့်ရှင်းမှုကိုအဓိကထား ရသော ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်းများ ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်း များနှင့် သင့်လျော်သည့် ညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့ချပေးသည့် ISO 8573-1 CLASS0လက်မှတ်ရရှိထားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
Atlas Copco မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆီကိုအသုံးပြုပြီး လေကိုထုတ်လုပ်ပေးသော G series ရိုထရီ (rotary )ကွန်ပရက်ဆာ နှင့် သံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ်စတင်( piston ) ကွန်ပရက်ဆာ ATB
နည်းပညာသည် ထုတ်လုပ်မှု ရန်လျှပ်စစ်မော်တာမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်သောအဓိက နည်းပညာဖြစ်သည်။